देउवा बिरुद्ध ५६ जिल्लाका सभापतिहरूले बोलाए छुट्टै भेला
बिहिबार ०५ असार, २०७६ (Thursday, 20 June, 2019)
चैत्र ०९, २०७५, शनिबार
काठमाडौँ — महासमितिको निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिले उल्टाएको भन्दै कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रयोजनका लागि छलफल गर्न राजधानीमा भेला बोलाएका छन् । काठमाडौंमा उपलब्ध जिल्ला सभापतिको बिहीबार बसेको बैठकले चैत २० र २१ गते राजधानीमा भेला गर्ने तय गरेको छ ।
पार्टी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउन एक तिहाइ महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर चाहिन्छ । स्वतः महाधिवेशन र क्षेत्रीय प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान हटाउने तथा आरक्षणको सुविधा दोहोर्‍याउन नपाउने गरी विधानमा व्यवस्था गर्नुपर्ने माग केन्द्रीय कार्यसमितिले सम्बोधन नगरेपछि जिल्ला सभापतिहरू विशेष महाधिवेशनको छलफलमा जुटेका हुन् ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको फागुन १२ को बैठकले स्वतः प्रतिनिधिको व्यवस्था यथावत् राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै आरक्षणको सुविधा दोहोर्‍याउन नपाउने व्यवस्थासमेत विधानमा थपिएन । यी दुवै माग सम्बोधन नभएपछि जिल्ला सभापतिहरू नेतृत्वसँग चिढिएका छन् ।
५६ जिल्ला सभापतिले यसअघि नै स्वतः प्रतिनिधिको प्रावधान नहटाइए र आरक्षणको सुविधा दोहोर्‍याउन नपाउने व्यवस्था विधानमा थप नगरिए विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गर्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसपछि बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा यस विषयमा कुरै नउठेपछि जिल्ला सभापति असन्तुष्ट छन् । नेतृत्वले महासमिति बैठकमा सभापतिहरूले सुझाव मात्रै दिएको, निर्णय नभएको बताउँदै आएको छ ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत पार्टीबाट निर्णय भइसकेको विषयलाई उठाउने गरी भेला बोलाउन उचित नहुने बताउँछन् । महासमितिमा सुझाव आएको हो, पारित भएको होइन, उनले भने, महासमिति बैठकमा निर्णय भएका विषयलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेको हो । उनका अनुसार यो मुद्दा सबै जिल्ला सभापतिको माग होइन । केही सभापतिले यो माग उठाउनुभएको हो तर केन्द्रीय कार्यसमितिका केही साथीले गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै पालादेखि कायम रहेकाले निर्णय नबदलौं भनेपछि यथावत् राख्ने निर्णय भएको हो, उनले भने, तलबाट आउनै हुन्न भन्ने होइन । स्वतः प्रतिनिधि भएर माथि चुनाव जितिहाल्ने पनि होइन ।यो समाचार आजको कान्ततिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
असार ०४, २०७६, बुधबार
गोल्ड मेडलनै किन्न पाईने भए पछि बिद्यार्थीले किन पढ्ने ?
असार ०५, २०७६, बिहिबार
टिभी व्यावसायि आन्दोलनमा : बिदेशी च्यानल बन्द हुने
काठमाडौंमा युवतीहरुमाथी सिलसिलेवार सिरिन्ज आक्रमण : कसले गर्दैछ यस्तो अपराध ?
सिंगापुर लैजाने भन्दै तीन सय युवाबाट लिईयो मोटो रकम : को हुन यी ठग ?
जनकपुरमा लगातार आठ सिलिन्डर बिस्फोट : तीन होटल ध्वस्त
लोकसेवाले मध्यरातमा निकाल्यो २५१ अधिकृतको नाम, को को परे ? (सूचीसहित)
क्रिकेटमा नेपालले एउटै खेलमा बनाएका २ विश्वरेकर्डमध्ये एउटा तोडियो अर्को कायमै
विदेशबाट भन्सार नतिरी ल्याइएका मोवाइल फोन ६ महिनापछि नचल्ने